Tag: ppc suuq geyn | Martech Zone
Tag: ppc suuq geyn
Su'aal aan wali iweydiiyo milkiilayaasha ganacsiga qaangaarka ah ayaa ah inay tahay inay sameeyaan ama aysan yeelin suuq-bixinta-gujintooda (PPC) iyo in kale. Maaha su’aal fudud ama maya. PPC waxay bixisaa fursad layaableh oo ay ku riixdo xayeysiinta dhagaystayaasha hortooda raadinta, bulshada, iyo bogagga internetka oo aadan caadi ahaan ku gaari karin habab dabiici ah. Waa maxay Suuq-geynta Bixi Hal Guji? PPC waa hab lagu xayeysiiyo internetka oo xayeysiiyaha uu ku bixiyo a
Jimcaha, Agoosto 28, 2015 Douglas Karr
Haddii aad raadineyso caawimaad ama khibrad raadin raadin, kheyraad aad u badan oo ka jira PPC Hero, daabacaad weyn oo ay Hanapin Marketing kula wadaagaan khibradooda. Hanapin ayaa dhawaan soo saaray macluumaadkan cajiibka ah, Tobanka Talooyin ee PPC ee ugu Sareeya ee Safarka iyo Dalxiiska Suuqa. In kasta oo kiiska adeegsiga uu yahay safar iyo dalxiis, talooyinkani waxay ku habboon yihiin suuq-geyn kasta oo raadinaya inay ku daraan hanaan habeynta raadinta ee lacag bixinta ee xeeladahooda PPC (Bixi Halkii Guji). Iyadoo leh 65%
PPC + Organic = Dhagsiin badan
Jimce, Maarso 30, 2012 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
In kasta oo ay tahay qayb iskeed u adeegta, cilmi baarista Google waxay soosaartay xogtan si ay u bixiso caddeyn ah sida sicirka gujintu u beddelo marka natiijada baaritaanka dabiiciga ay la socoto xayeysiinta raadinta lacag bixinta. Isku darka labada ayaa ka caawin kara suuq geyntaada laba xagal oo kala duwan… bixinta wax yar oo guryo ah si aad u gujiso bogga natiijada mashiinka raadinta. Sababta kale, oo laga yaabo inay ka sii xasaasisan tahay, waa in la barakiciyo ugu yaraan hal tartame!
Ku maalgeli Noocaaga Olole Nooc PPC ah
Monday, August 29, 2011 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Chris Bross
Marka waxaad ku shaqeyneysaa ganacsi suuq buuxa. Waxay u badan tahay, tani waxay ka dhigan tahay inaad ka soo horjeeddo qaar ka mid ah celcelisyada jilicsan ee CPC ee keywords. Ama waxaa laga yaabaa inaad tahay milkiile ganacsi oo yar oo maxalli ah, oo jeclaan lahaa inuu ku soo galo xayeysiinta khadka tooska ah laakiin kaliya ha dareemin inaad leedahay miisaaniyad suuq ku filan oo aad kula tartami karto. Maaddaama caannimada internetka iyo suuqgeynta PPC ay korodhay, ayaa sidoo kale tartanku uu kordhay, taas oo iyaduna kor u qaadeysa kharashka. Intaadan go’aankaas gaarin